Maalinta: Diseembar 22, 2018
Wasiirka Turhan: Ale-ga Gaadiidka Gaadiidka ah wuxuu ahaa Safar Amaan ah
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa ka jawaabaya su’aasha loo gudbiyay shabakadda 30 October ee shabakadda tareennada waddanka kadib shilkii tareenka xawaaraha-xawaaraha ku socday ee ka dhacay Ankara, kaasoo sababay dhimashada 9. [More ...]
Xakamaynta Nidaamka Tareenka ee Istanbul iyo Lengths
Xalka ugu dhaqsaha badan uguna waxqabadka badan ee gaadiidka dadweynaha waa metro maanta. Waxay bixisaa gaadiid degdeg ah, waqti iyo raaxo leh inta u dhaxaysa laba dhibco iyada oo aan ku xayiran taraafikada. Mitrooga waa lagama maarmaan magaalooyinka casriga ah. badan [More ...]
Dib u soo celinta tareenka taariikhiga ah ee 'Banderma' waa mid sii socota
Dib u soo celinta xarun tareenka taariikhi ah oo ku taal Bandırma Paşabayır Quarter degmo degmo ayaa sii socota. 106 waa xarun taariikhi ah oo ay dhistay Faransiiska sanado ka hor oo ay ku qoran yihiin qoraallo Faransiis iyo Ottoman “BANDERMA” ah. [More ...]
Mashruuca Macaamilka ee Macaamilka ee Bayriga EIA EIA oo la joojiyay
Dacwada loo gudbiyey Qiimaynta Saamaynta Deegaanka (EIA) go'aan wanaagsan oo ay siisay Ururka Guryaha ee Injineerrada Turkiga iyo naqshadeeyayaasha Mashruuca Isgoysyada Izmir ee Izmir, Maxkamadda Maamulka Izmir waxay amartay in la joojiyo Go'aanka Saxda ah ee EIA. [More ...]
IZBAN Tilmaamo Daryeel Caafimaad?
Magaalada İzmir, shaqo-joojinta İZBAN, oo ah nolosha gaadiid, waxay gashay maalintii 13, shaqaaluhu waxay ku wargeliyeen dadweynaha guddi ku saabsan shaqo-joojinta. Berkant Arda oo ah wakiilka shaqaalaha ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda dayactirka tareenada traZBAN ee golaha. [More ...]
Sharaxaad Muhiim ah ee Dhibaatooyinka Gaadiidka ee Izmir
Mert Yaygel, Madaxa Waaxda Gaadiidka ee Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir, ayaa sharaxaad ka bixiyay dhibaatooyinka gaadiidka ee Izmir. Isagoo sheegaya in gaadiid badan ay ka gudbaan wadada Altınyol, oo kamid ah meelaha ugu mashquulka badan magaalada, Yaygel wuxuu yiri [More ...]
Shaqaalaha IZBAN waxay la kulmeen dadka reer Izmir
Shaqaalaha İZBAN ee ka tagey maalintii 11 ee shaqo-joojinta magaalada İzmir ayaa xalay kula kulmay dadka reer mzmir heerkulka dadweynaha ee NHKM Konak si ay bulshada ugu wargeliyaan una kordhiyaan wadajirka. Shaqaalaha qeexaya hawlgalka aragtida iyo been abuurka employerZBAN loo shaqeeyaha, [More ...]
Metro waxaa laga qaxay Marseille, France, 14 Injured
Jimcihii Marseille, France, gaari tareenka dhulka hoostiisa ayaa burburay oo shil galay. 14 qof ayaa ku dhaawacmay shilkaas. Tareenka Metro ee magaalada Marseille, France wuxuu ka goostaa saldhigga metro ee Sainte Marguerite Dromel [More ...]
1 January 2019 ee Moscow
1 ee Moscow Laga bilaabo Janaayo 2019 tareenka rakaabka ah iyo tareennada korantada waa la kordhin doonaa. Xilligii u dambeeyay ee "2017", qiimaha tareenka Gobolka Moscow wuxuu isu beddali doonaa qiimayaal cusub sidii sanadka cusub. Sanadka Cusub [More ...]
Baaskiilada fudud ee ciidanka bilayska
Iyada oo mashruuca ay hirgalisay Dawlada Hoose ee Magaalada Ordu, Baaskiiladaha caqliga leh ee kordhiya isla markaana kor u qaadaya isticmaalka baaskiiladaha dhaqanka magaalada muddo hal sano ah ayaa sii wacaya magaalada magandas. Sixirka magaalada waxaa loogu talagalay oo kaliya loogu talagalay baaskiiladaha caqliga leh [More ...]
Madaxweynaha Ergün oo baaraya shaqooyinka basaska deegaanka
Cengiz Ergün, Duqa Magaalada Manisa Metropolitan District, wuxuu booqday wadada İzmir Street halkaas oo howlaha asphalt loogu fulinayo basaska korontada ee deegaanka u fiican oo bilaabi doona howlaha bilaha ugu horreeya ee 2019. Duqa magaalada Ergun wuxuu salaamayaa muwaadiniinta, farshaxanada [More ...]
Istanbullular Attention! Ka shaqeynta TEM Wadada TEM
Jidka TEM-ka Wadada 'O-4 (TEM)' waxaa loo isticmaalaa dhismaha buundada bartamihiisa inta u dhexeysa Isgoyska Tuzla Orhanlı iyo Isgoyska Şekerpınar. [More ...]
10 Milyan Euro Yimid Bursaray
Dhibaatada ugu muhiimsan ee Bursa waa gaadiid. Natiijooyinka sahaminta ama makarafoonka ama ay dhiibiyeen suxufiyiinta muwadiniinta ama maamulayaasha magaalada ayaa had iyo jeer tilmaamaya isla dhibaatadaas. Duqa Bursa Alinur Aktaş, tan [More ...]
Labo Gawaarida Lagu Qaadayo oo ku Yaalla 2020
Laba shirkadood ayaa soo gudbiyay qandaraaska qandaraaska labo haamood oo cusub oo la qorsheeyay in lagu daro maraakiibta Dowladaha Hoose ee Magaalada Izmir. Iyadoo la raacayo nidaamka qiimeynta, shirkadda guuleysata ayaa la go'aaminayaa oo gudahood 420 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda heshiiska [More ...]